Askar ka tirsan dowladda oo saaka nin rayid ah ku dilay degmada Dayniile – idalenews.com
Askar ka tirsan ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa Nabad sugida ayaa saaka qof rayid ah ku dilay degmada Dayniile, iyadoo saaka xaalad aan deganeyn ka jirtoqeybo ka mid ah xaafadaha degmada.
Warark ayaa sheegaya in ruuxa la dilay uu saaka ka qaxweynayay meel subixii dadka fariisteen, waxaana la sheegay in ilaa afar nin oo ka tirsaneyd Ciidamada nabadsugida ay goobta ka wateen, iyagoo markii dambe xabad kaga dhiftay wadnaha.
Qof goob jooge ahaa ayaa sheegay in ciidamada ay si bareer ah u dileen ninka, isla markaana uu ahaa ruux iska caadi ah oo aan wax dambi ah laheyn, hase ahaatee inta aanay xabsiga geyn ay goobta ku toogteen.
Dadka deegaanka ayaa aad uga naxay dilkan ay geysteen ciidamada nabadsugida , iyadoo saaka qal qal uu ka jiray Xaafadaha degmada Dayniile oo laga maqlayay rasaas ay ridayeen ciidamada.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa cabasho ka imaaneysay dadka deegaanka oo qaati ka taagnaa dhibaatooyin ay u geysanayeen ciidamada dowladda ee ku sugan degmadaas, iyadoo ugu baaqay saraakiisha ciidamada inay wax ka qabtaan.